Sawirrada qaaradda Afrika ee usbuuca:13-19 May 2016 - BBC Somali
Sawirrada qaaradda Afrika ee usbuuca:13-19 May 2016
20 Maajo 2016
Waa xulka qaar ka mid ah sawirrada qaaradda Afrika ee usbuucaan:
Talaadadii la soo dhaafay, gabar ku sugan caasimadda Kenya ee Nairobi ayaa guri ku yaala xaafadda Mathare oo la doonayay in la dumiyo waxa ay ka badbaadinaysa hantideeda ugu qaalisan. Mas’uuliyiinta dalkaasi ayaa duminaya dhismooyin halis ah kaddib markii bishii Abriil guri ku dumay Nairobi uu sababay dhimasho badan.
Haweeney ka tirsan qowmiyadda Berberiga ee dalka Morooko, ayaa maalintii jimcaha ahayd waxa ay ka qayb qaadanaysay tartan dhaqameedka quruxda ee Miss Rose oo qayb ka ah xafladda Rose ee Kelet oo ku taala buuraleyda Atlas.
Maalintii xigtay, bakhaar halkaasi u dhow ayaa haweeney waxa ay kala sooceysaa ubaxa Damaska ee dhawaan la soo guray, kaasi oo ah mid muhiim ah marka la sameynayo dawooyinka la isku qurxiya qaarkood.
Maalintii Talaada ahayd, cayaaryahannada kubadda koleyga ciyaara oo saaran kuraasta dadka curyaannka ah ayaa magaalada Juba ee caasimadda dalka Suudaanta Koonfureed waxa ay qaadanayaan tababar toddobaadle ah. Inta badan ciyaartooydaasi ayaa ku dhaawacmay halgankii dalkaasi uu ugu jiray in uu madaxbannaani ka qaato Suudaan inteeda kale.
Maalintii Jimcaha ahaydna, gudaha dalka Koonfur Afrika, JP "Tinkerbell" Kruger (bidix) iyo Yannick "Black Mamba" Bahati (midig) waxa ay ka qayb qaadanayaan tartan dagaal ba’an. Ciyaaraha dhanka dagaalka ayaa ku sii badanaya dalkaasi Koonfur Afrika.
Maalintii xigtay, gudaha dalka Ivory Coast, nin kalluumeysato ah ayaa waxa uu diyaarinayaa shabaqii uu ku soo kalluumeysan lahaa ka hor inta uusan badda u shaqo tagin. kalluumeysatada yar yar ee dalkaasi ayaa tartan xooggan kala kulmaya kalluumeysatada waaweyn ee kalluunka ka ganacsada.
Maalintii Arbacada ahayd, Somaliland waxaa laga xusay 25 sano guuradii ka soo wareegtay tan iyo markii ay ku dhawaaqday madaxbannaanideeda, waxaana gaardis lagu qabtay magaalada caasimadda u ah ee Hargeysa. Balse Somaliland wali dal ahaan looma aqoonsan.
Isla maalintaasi, gudaha magaalada caasimadda ah ee Abuja ee dalka Nigeria, dibadbaxayaal ka careysan tallaabadii dhawaan boqolkiiba 67 lagu kordhiyay qiimaha batroolka dalkaasi ayaa waxa ay isugu soo bexeen gudaha magaaladaasi.
Sidoo kale isla maalintii arbacada ahayd, kooxo diimeedyo ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaala madaxda dalka Zimbabwe ee Harere, si ay u muujiyaan cabashadooda ku aadan waxa ay u arkaan tallaabooyin ka dhan ah masiixiga oo laga billaabay iskuulada dalkaasi. Waxaa tallaabooyinkaasi ka mid ah in dalka loo dhaarto, arrintaasi oo ay sheegeen in ay liddi ku tahay waxa uu farayo baybalka.
Maalintii isniinta ahayd, qaar ka mid ah wiilasha dalka Masar ayaa isku dayay in ay ka badbaadaan kuleylka ba’an ee ka jiray caasimadda Qaahira.
Labo nin oo reer Liibiya ah oo qare iibinaya ayaa isku dayaya in ay soo jiitaan dadka maalintii axadda ahayd ka dukaameysanayay magaalada Benghazi ee ku taala bariga dalkaasi.
Askar ka tirsan booliska dalka Kenya oo isniintii la soo dhaafay kala ceyrinaya dad ka muddaharaadaya guddiga doorashooyinka dalkaasi. Kaddib waxaa soo baxay cabasho ku aadan booliska oo si xun ula dhaqmaya dadka rayidka ah, booliskuna waxa ay sheegeen in ay la tacaalayeen dad rabshado kicinaya iyo kuwo bililiqo doon ah.
Sawirrada todobaadkan iyo sida looga jawaabay qarixii Soobe
Sawirrada weerarka Las Vegas
2 Oktoobar 2017